Procambarus na ‘foza orana ‘
Amidy amin’ny kapoaka efa voaendaka hoditra indray
Tany amin’ny taona 2008 no nanomboka nihanaka teto amintsika ity foza iray nantsoin’ny maro hoe ‘foza orana’ ity. Fampahatsiahivana fotsiny no hilazanay fa anisan’ny biby haingam-pitombo tokoa ny foza orana satria tsy mba mila lahy izy ireny fa samy manatody avokoa izy rehetra. Ambonin’izany dia afaka mivelona sy mitombo anatin’ny rano madio na maloto, na rano mandeha na miandrona izy ireny. Amin’ny ankapobeny dia 800 atody ka hatramin’ny 1 miliara atody isan-taona ny avoakan’ny foza orana iray.
Nanomboka teo no niantombohan’ny fiantsoana izay zava’misy tsy dia tsara loatra ho “foza orana”. Nahazo izany anaram-bosotra izany avokoa na olona (hainareo angamba ny olona tiana ho lazaina eto), na telefaonina… Tsy dia izay loatra aloha no asiana resaka izao fa ilay tena foza orana, biby mivelona anaty rano.Tato ho ato anefa dia tsy hita firy teny an-tsena na teny amin’ny toera’pivarotana ny foza orana. Misy toerana mbola ahitana azy ihany anefa toy ny eny amin’ny toerana somary ambanimbany vohitra. Dia nampanontany tena hoe: fa nankaiza tampoka tokoa moa izy ireny no dia haingana ihany dia toa nanjavona ny fisiany ? Tsy fantatra aloha izay valin’izany. Fa nisy moa ny fandrarana ny fihinanana azy ireny kanefa tsy nahasakana ny mpivarotra sy ny mpividy izany. Fa miketrika marina ny sain’ny olombelona.
Matetika dia ny hanamora ny asan’ny mpividy no ataon’ny mpivarotra. Amin’izao fotoana dia amidy efa voavofy avokoa na ny lasopy na ny ovy fanendy na ny tongolo gasy …; Mba hanomezana endrika ny foza orana sy hanamora ny fandrahoana azy angamba dia nendahina ihany koa ny hodin’izy ireny amin’izao fotoana. Efa mahazo latabatra toy ireny trondro sy foza tena izy ireny izy ity. Tsy misy ahafantarana azy ho foza orana intsony fa tena mamitaka. Somary manompy mavokely hafahafa izay ny lokony. Raha vao mijey azy dia toa ireny krevety voaendaka hoditra ireny izy io. Raha mandeha eny amin’ny tsenan’Isotry eny dia mahita azy. Somary natao lafolafo kokoa noho ny foza orana tsy miala hoditra ny kapoaka. Dia mahavariana tokoa ny fahaizan’draolombelona mitady vola.